संसारका यी ६ देश, जहाँ सूर्य अस्ताउँदैन ! | Investopaper
संसारका यी ६ देश, जहाँ सूर्य अस्ताउँदैन !
पृथ्वी सौर्यमण्डलको एक सदस्य हो । यहाँ दिन र रात हुनु प्राकृतिक नियम नै हो । तर विश्वमा यस्ता पनि देश छन् जहाँ, केही समय सूर्य अस्ताउँदै अस्ताउँदैन । ती देशमा महिनौ लामा दिन हुने गरेका छन् । संसारका यी आधा दर्जन देशमा वर्षको ३ सय ६५ दिनमा करिब २ देखि अढाई महिनासम्म जतिबेला पनि सूर्य चम्किरहन्छ ।
कुनै देशमा ५० दिन त कुनैमा ७३ दिन अनि कुनैमा ७६ दिनसम्म सूर्यास्त हुँदैन । सोच्नुहोस् त करिब साढे २ महिनाको एउटै दिन हुँदा मानिसको स्थिति के होला ? प्रकृतिको यस्तो लिला सायद धुर्वीय रेखाको बीचमा रहेका मुलुकहरुमा भएको देखिन्छ ।
यी मुलुकका मानिसहरुले आफ्नै ढंगले जिवन जिउन बानी परेका छन् र त्यसै अनुरूप दैनिकी चलिरहेकाे छ । तर, बाहिरी मुलुकहरुबाट पहिलोपटक यी देशमा पुग्ने मानिसहरुलाई भने अनौठो लाग्ने गर्छ ।
सूर्यास्त नहुने ६ देशहरूः
१) नर्वेः- सामान्य ज्ञानका पुरस्तकहरूमा मध्यरातमा सूर्य देखिने देश कुन भन्दा नर्वे भन्ने जवाफ पाइन्छ । नर्वेमा मे महिना देखि जुलाइ महिनासम्म ७६ दिन सूर्यास्त हुदैन । दिनकाे २० घण्टासम्म चम्किलाे घाम लाग्छ भने नर्वेकाे उत्तरी क्षेत्र स्लाभार्डमा अप्रिल १० देखि अगस्त २३ सम्म लगातार घाम लाग्छ ।
२) आइसलैण्डः- यूरापकाे एक सुन्दर शहर अनि बेलायत पछिकाे दाेश्राे ठूलाे आइल्याण्ड हाे । याे देशमा पनि मे महिनाकाे १० तारिख देखि जुलाइ अन्त्यसम्म घाम लागिरहन्छ, अर्थात रात हुदैन।
३) क्यानडाः- विश्वकै ठूलाे दैश जसकाे धेरैजसाे भूभाग हिंउले ढाकिएकाे छ । क्यानाडाकाे उत्तरी प्रान्तहरूमा गर्मी माैसममा ५० दिनसम्म सूर्यास्त हुदैन ।
४) अलास्काः- अलास्कामा पनि मे महिनाकाे अवन्तिमतिरबाट जुलाइ अन्तिमसम्म सूर्य अस्ताउदैन । तर, जाडाे माैसम (विन्टर) मा भने अन्धकार हुन्छ ।
५) स्वीडेनः- स्वीडेनकाे सूर्याेदय अलि फरक प्रकारकाे छ । माथि उल्लेित देशहरूभन्दा स्वीडेन अलि ताताे वा न्यानाे पनि छ । यहां मे महिनादेखि अगस्त महिनाकाे अन्तिमसम्म मध्यरात पछि सूर्यास्त भए पनि विहानकाे साढे चार बजे नै सूर्याेदय हुन्छ ।
६) फिनल्याण्डः- हजाराै तालहरू र अाइल्याण्डकाे देश भनेर परिचित फिनल्याण्ड पनि कहिल्यै रात नपर्ने देशकाे रूपमा चिनिन्छ । यहां पनि गर्मी माैसममा (समर) ७३ दिनसम्म सूर्यास्त हुदैन ।
← शेयर कारोबार गर्दा ब्रोकर कमिसनमा कति जान्छ? यसरी गर्नुहोस हिसाब।
लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थामा, विद्युतको समयानुकूल महसुल तय गर्ने तयारी →